SP-USB01 120ml Ultrasonic Wood Grain USB Diffuser, China SP-USB01 120ml Ultrasonic Wood Grain USB Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri Limited
120ml Ultrasonic Wood Wood Zviyo USB Diffuser
1.MULTI-FUNCTION: Iyo USB mini aromatherapy diffuser inopa akawanda mabhenefiti. Shandisa sedhiraivha inotakurika, muhofisi mweya unozorodza kana humidifier. Nakidzwa nemhepo nekunhuwirira kwakanaka kunozadza kwese kwese, chengetedza nyowani uye hwema yemahara nharaunda.
2.Nokuparadzira kunhuwirira kunofadza uye kunotora mweya: ichi chinosimudzira chinogona kusimudza kushushikana kubva pazuva rinotyisa, rakakwana rekufukidza utsi uye hwema hwakaipa kubva kuzvipfuyo zvako.
3.Whisper-Quiet Ultrasonic Kushanda: Nyorovesa nzvimbo yako yekugara kudzivirira yakaoma, isina chinhu mweya uye dzihwa kutapura vaunoda. Dzivirira rakaoma uye rakapetwa ganda mumwedzi yakaoma yechando kana mukamuri yemhepo mamiriro.
4.Easy otomatiki Off Rinoshanda: Vhara kana mvura yapera. Inobatsira kumba, yoga, hofisi, spa, kamuri, uye mudiki kamuri. Chipo chakanakira mhuri yako neshamwari kuti uwane kubva kunhuwirira-kwakavakirwa kutandara.
goho DC4V, 1A
Saizi yeyuniti Φ116 * 142mm
Unit uremu 380g
Ruvara rwebhokisi saizi 12 * 12 * 15.5 cm
nhuri 24 zvidimbu / katoni
Ukuru hweCarton 50 * 37.5 * 34CM
NW / carton 9.5kgs
GW / katoni 10.5kgs